Ikhadi elitsha le-Quek 3G-SDI / iKhadi le-ASI le-DekTec linokuKhulisa iMveliso yeVidiyo kunye nokusasazwa kwabaSasazi | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » I-Quek entsha ye-DekTec ye-Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card inokukhulisa ukuveliswa kweVidiyo kunye nokuSasazwa kwabaSasazi
Ividiyo inike ukudalwa komxholo ukuqala konke, kwaye inkqubo yokuhambisa yenza kuphela isenzo sokwakha abaphulaphuli ukuba banomdla ngakumbi kubaphuhlisi bokuyila. Amagcisa kushishino losasazo ahlala ekhangela iindlela ezintsha zokwenza umxholo ongcono kwaye enze ukuba zifikeleleke kubaphulaphuli bawo njengoko ziqhubeka nokukhula. Ukuba yayikhona indlela yeengcali zokusasaza ukuphucula izakhono zabo zokudala ividiyo, emva koko I-DesTek inesisombululo, kwaye lonto intsha Ikhadi le-Quad 3G-SDI / ASI PCIe, i I-DTA-2174B.
Ukususela kwi2004, DekTec ibonelele ngetekhnoloji yeTV yedijithali ngesixhobo esenziwe ngobuchule kunye nezixhobo zesoftware esekwe kwi-PC esemgangathweni. Inkampani ibonelela nge-PCI-E, i-USB-2, i-USB-3 kunye nezixhobo ezizimeleyo ukuze zikhuphe iikhompyuter kwindawo yedijithali yevidiyo kwiziko levidiyo elisasazwayo, ilebhu yovavanyo, okanye ukudityaniswa kwe-OEM. IiDekTec abathengi banokusebenzisa indleko eziphantsi, ezisebenzayo ze-CPU yanamhlanje ukuze kuphuhliswe izisombululo ezingenaxabiso, ezinobuchule. Oku kwenziwa ngokusebenzisa iVidiyo yabo yedijithali I / O kunye nebhodi yokulungisa.
Iqela le IiDekTec iimveliso zixhasa i-ASI, i-TSoIP, i-RF, i-SDI, kunye ne-UHD I / O, kwaye zinika iimodyuli zovavanyo kunye needemodulators zemigangatho emininzi. Iqela lemigangatho exhaswayo ibandakanya
Nawuphi na umphuhlisi wezixhobo zosasazo ezisekwe kwi-PC unokudibanisa IiDekTec Amakhadi e-PCI njenge-adapters interface kwinkqubo yabo. Le nkqubo ibizwa ngokuba yi "OEM" esetyenziselwa amaxabiso akhethekileyo eehardware. Uninzi lwezixhobo ze-USB zenkampani ziyafumaneka ngaphandle kwemeko njengezixhobo ze-OEM, nazo. Ukudibanisa izixhobo zabo kunye nesicelo somsebenzisi, DekTeck inikezela nge-SDK yasimahla yeLinux kunye neeWindows, eziqhelekile kuzo zonke izixhobo zazo.
I-DekTec's Quad 3G-SDI / ASI PCIe Card DTA-2174B
Ukongeza ekubeni nexabiso elinomdla kubaphuhlisi, ii-DekTec's I-DTA-2174B Ikhadi lisebenza njengempumelelo yomtsalane nekhadi lakhe elaziwayo le-3G-SDI. Esi sixhobo sine-latency esezantsi kunye ne-12G-SDI inkxaso kwizibuko 1, elenza ukuba nomtsalane ngakumbi kubaphuhlisi bemveliso yevidiyo kunye nezixhobo zokuhambisa kunangaphambili. Zonke Ii-DTA-2174B's amazibuko axhasa i-DVB-ASI, kwaye evumela ukuba kuxutywe iinkqubo ezixinzelelweyo / ezinganyanzelwanga ezinjenge-4K encoder ene-12G-SDI igalelo kunye nokuphuma kwe-ASI, okanye i-4K decoder ene-ASI Igalelo kunye ne-12G-SDI.
Isixhobo esinye esisebenza ecaleni kwe I-DTA-2174B Ikhadi le ye-DekTec Matrix API® I-2.0, eyenza ukuba umsebenzisi enze izicelo zesiko ze I-DTA-2174B. Iimpawu ezininzi zeMatrix-API zibandakanya:
Faka ngqo okanye ukhuphe iisampuli zeaudiyo / zevidiyo okanye idatha ye-ANC
Ukuguqulwa kwefomathi yePixel
The Ii-DTA-2174B's I-firmware inamazibuko amane azimeleyo, kwaye nganye inokulungiswa ukuze isebenze njenge-ASI okanye i-SD /HD/ 3G-SDI igalelo okanye ukuphuma. Ichwechwe ngalinye lingasebenza njengekopi ebhlogiweyo kabini yelinye ichweba ukwenza iikopi ezininzi zesiginali efanayo yokukhupha. Amachweba amiselwe njengakhutshwa ngaphandle angadityaniswa kwi-bi- / tri-level genlock input port.
IiDekTec I-DTA-2174B ulilungu lesibini kuluhlu olutsha lwenkampani ye-SDI / i-ASI yeadaptha ye-PCIe, kwaye la makhadi abonelela ngamanani ahlukeneyo amazibuko amabi, ngamaxabiso okhuphiswano kakhulu.
Ngamaxabiso angcono kunye nolwazi oluthe kratya malunga I-DTA-2174B ikhadi, tyelelo www.dektec.com/news/2020/#Feb20.
Kutheni abasasazi kufuneka bakhethe i-DekTec
Kwiminyaka elishumi elinesithandathu emva kokusekwa kwayo, iDekTec inovulindlela kwi-ATSC 3.0. Ngelo xesha libonelele ngeemodyuli zovavanyo kunye nabamkeli, kunye nokubonelela abaphuhlisi ngesoftware yovavanyo yezixhobo ezininzi ezibandakanya iStreamXpert ye-MPEG-2 TS, ixesha langempela le-OTT okanye uhlalutyo lwangaphandle, iSdEye ye-SDI engacinezelwanga kunye ne-UHD (4K) ene-HDR yokujonga.
I-DekTec ixhasa i-HEVC, i-H.264, uhlalutyo lwe-AC-4, nokunye okuninzi. Ikwabonelela ngemveliso kubathengi bokugqibela, abathengisi, abahlanganisi, okanye i-OEM ngokufakelwa kwi-Broadcast, Cable, satellite, IPTV, I-Signage yedijithali, isicelo sezoNyango, ezomkhosi, ukhuseleko lwasekhaya, njl. Njl. Inkampani inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlola kunye nezisombululo zemilinganiselo yentloko kunye nezicelo zokujonga kude.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neDekTec, tyelela www.dektec.com/.
shishini iingcali zosasazo Ukudalwa kokuqukethwe I-DesTek U sasazo I-DTA-2174B Ikhadi le-Quad 3G-SDI / ASI PCIe 2020-05-24
Previous: I-Draco vario ye-HDMI ye-Ultra ye-Ultra ivelisa ukuhanjiswa kweVidiyo ePhakamileyo
next: UMhleli oMkhulu / uMzobi oPhezulu woHlobo lweMifanekiso